ဧဝံဂေလိတရားဟောဆရာကို ထောင်ဒဏ် (၄၃)နှစ်အမိန့်ချ – ZALEN
အိန္ဒိယနိုင်ငံက မြန်မာစစ်ဘေးရှောင် ၁ဦးကိုဗစ်နဲ့သေဆုံး၊ ယနေ့ဟားခါးတွင် ကိုဗစ်နဲ့ ၂ ဦးသေဆုံး
ကလေးမြို့တွင် စက်တင်ဘာလအတွင်း ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့သေဆုံးသူ ၃၀ နီးပါးရှိ
တမူးတွင် စစ်ကောင်စီက ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေမယ့် ပြည်သူတွေက အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် CDM တွေထိုးတဲ့ကာကွယ်ဆေးသာ သွားရောက်ထိုးနှံကြ
ယနေ့ဟားခါးတွင် ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ ၃ ဦးသေဆုံး
ရိုနယ်ဒိုကို ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်းက ဂိုးသွင်းအများဆုံးဆု ချီးမြင့်
ဧဝံဂေလိတရားဟောဆရာကို ထောင်ဒဏ် (၄၃)နှစ်အမိန့်ချ
January 9, 2020 January 16, 2019 by Zalen Media
သက်ငယ်မိန်းကလေးနှစ်ဦးကို အဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့ ဧဝံဂေလိတရားဟောဆရာတော် Lal Biak Lar@Lar Boih ကို ကလေးခရိုင်တရားရုံးက ဒီနေ့ ညနေပိုင်းမှာ ထောင်ဒဏ်(၄၃)နှစ်အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
Lar Boih ကို ပုဒ်မ ၃၇၆ နဲ့ သီးခြားစီ အမှုဖွင့်ထားတဲ့တွက် အမှုတစ်ခုတွင်ထောင်ဒဏ်နှစ်(၂၀) စီချမှတ်ပြီး၊ ပုဒ်မ ၅၀၆(ခြိမ်းခြောက်မှု)အတွက် ထောင်ဒဏ် (၂)နှစ် နဲ့ ပုဒ်မ ၃၂၃(နာကျင်စေမှု)အတွက် ထောင်ဒဏ် (၁)နှစ် စုစုပေါင်း ထောင်ဒဏ် (၄၃)နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
ဧဝံဂေလိတရားဟောဆရာ Lar Boih ဟာ ဖလမ်းမြို့နယ်ကနေ ၎င်းတို့နေအိမ် ကလေးမြို့နယ် လက်ပံခောျင်းကျေးရွာမှာလာရောက်နေထိုင်တဲ့ မိုင်….(၁၅နှစ်)ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇွန်လပိုင်းမှာလည်းကောင်း၊ မိုင်….(၁၄နှစ်)ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလမှာလည်းကောင်း အဓမ္မပြုကျင့်တယ်လို့ဆိုကာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ(၁၃)ရက်တွင် ကယာကံရှင် ကလေးမိဘတွေကိုယ်တိုင်က တာဟန်းရဲစခန်းမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ( ၁၃)ရက်တွင် အမှုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ(၁၁)ရက်နေ့တွင် ကလေးခရိုင်တရားရုံးက ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၇၆(မုဒိမ်းမှု)၊ ၃၂၃(နာကျင်စေမှု)၊ ၅၀၆(ခြိမ်းခြောက်မှု)၊ ၃၇၆/၅၁၁(မုဒိမ်းပြုကျင့်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်မှု) တို့နဲ့ တရားစွဲတင်ထားပါတယ်။
ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် ယောက်ဖဖြစ်သူကိုဓားနဲ့ခုတ်သတ်ပြီးညီမနဲ့တူ ၃ယောက်ကိုဓားနဲ့ခုတ်ဒဏ်ရာရရှိ
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်က ရီလ်သီးရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့တဲ့အပြင် ထလန်ရောန်ကျေးရွာအိမ် ၆ လုံးကိုမီးထပ်ရှို့၊ ဖလမ်းမြို့တပ်ကုန်းကနေ လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်နေ
ဖလမ်းမြို့နယ်တွင် ဘုရားကျောင်းအပါအဝင်အိမ် ၄လုံးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မီးရှို့
ဖလမ်းမြို့နယ်တွင် စစ်ကောင်စီပစ်သတ်လို့သေဆုံးတဲ့ ရွာသား ၂ယောက်အလောင်းတွေ့ရှိ
ကလေးမြို့နယ်တွင် မိုးကြိုးပစ်၍ ယောက္ခာမနဲ့ သားမက် သေဆုံး
လုမ်ဘန်ကျေးရွာက စားသောက်ကုန်တွေနဲ့ အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေခိုးယူသွား
CDM လုပ်တဲ့ တပ်ကြပ်ကြီးရဲ့ မသန်စွမ်းညီမ ၂ ယောက်၊ ၁၀ နှစ်အရွယ်တူမအပါအဝင် အမျိုးသမီး ၅ ယောက်ကို စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်
တီးတိန်မြို့အနီးတွင် လေသေနတ်နဲ့ငှက်ပစ်တဲ့ လူငယ် ၂ ယောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီး
မဏီပူရ်ပြည်နယ်တွင် မြန်မာစစ်ဘေးရှောင်များ အိမ်ပြင်မထွက်ဖို့သတိပေး
ကလေးမြို့တွင် ချင်းလူမှုရေးအသင်း(ဗဟို)ရဲ့ အောက်ဆီဂျင်စက် ရောက်လာ
စစ်တပ်ပင်စင် ရှမ်းနီ(တိုင်းလျှန်) သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီက အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးကို စစ်ကိုင်းတိုင်း တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးခန့်အပ်
ပြည်ပရောက် ချင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေက ပြည်တွင်းကလူငယ်တွေကို အင်္ဂလိပ်စာအခမဲ့သင်ပေးမယ်
ဖလမ်းမြို့နယ် ကျေးရွာအချို့မှာကိုယ်ထူကိုယ်ထ ညကျောင်းဖွင့်
ZCD ပါတီဥက္ကဌ ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမား ပူးကျင်ရှန်းထန် ကွယ်လွန်
မင်းတပ်-မတူပီကြားတိုက်ပွဲတွင် CDFရဲဘော် ၃ ယောက်ကျဆုံးပြီး စကစတပ်ရင်းမှူးအပါအဝင် (၁၀)ယောက်သေဆုံး
တကျော့ပြန် မင်းတပ်တိုက်ပွဲမှာ CDF နဲ့ CNF ရဲဘော် ၁၂ ယောက် ကျဆုံး
မင်းတပ်သို့စစ်ကူသွားဖို့ ကျောက်ထုသို့ စစ်ကား ၄ စီး နဲ့ ရဟတ်ယာဉ် ၂ကြိမ်ပျံသန်း
Designed & Developed by SalaiZingBawi.
© 2021 Zalen Media. All Rights Reserved.